Home » Critic » အလင်းခြုံတဲ့ သတင်း Zone-34
Posted by alinsett on Apr 23, 2015 in Critic, Environment, History, My Dear Diary, Myanma News, Myanmar Gazette, News | 26 comments
အလင်းခြုံတဲ့ ပုလင်းဘုံ…… အဲလေ သတင်းစုံ ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်။
.သောက်ချင်တာတွေပဲ မြင်နေတယ်ပေါ့လေ ဟက်လား. . .
ဘယ်နေ့တိုက်မှာလဲ သောက်ချင်နေတား))
.တောင်ကြီးကမိတ်ဆွေတယောက်က အေးသာယာဝိုင်….လူကြုံနဲ့ ပေးထားတာ.. ရှိတယ်..
.သောက်မား… သောက်ရင် … အခုလာမယ့် စနေနေ့ညနေဘက်… ဆုံကြဇို့….
နှစ်လုံး… သယ်ရင်းနဲ့ဆို လေး ငါး ယောာက်လောက် ဖြစ်နိုင်တယ်… အာဟိ…
.Phat thwar tal nor
ဟုတ်… ဇူးဇူးပါ ဦးမိုက်ရေ…
အပေါ်က အာမေဋိတ် မှတ်ချက်တွေကို ကြိုက်တယ်လို့။
အဟဲ… ဒီအတိုင်း သတင်းကြီးပဲ တင်နေတာ ရိုးနေလို့… အဲ့ဒါလေးတွေ ထည့်ရေးလိုက်တာ..မမဂျီး..
အိုးလာလား ၃၄ တောင် ရှိသွားပြီလား။ Congratulations!!! :))
သတင်း ​ခေါင်းစဉ်​ ​ပေးထားတာ​လေး​တွေက​တော့ မိုက်​မိုက်​
-လူ့အခွင့်အရေး လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာပုလို့ ကြောက်နေကြပါလိမ့် ???
-စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြို့တိုးတက်ရေး အသိပညာပေးဖစ်ဖစ်.. -တစ်ခုခု..သူတို့နားမလည်နိုင်လောက်တဲ့ ခေါင်းစဉ် ပြောင်းတပ်လိုက်..ပီးရောစ်
.အေးနော်… အဲ့လို လုပ်ရမှာ..
နီတို့ နှစ်ယောက် မင်္ဂလာသတင်း ထည့်ရေးချင်နေပြီ… ဘယ်တော့ ဖြစ်မလဲ…
အံစရာ အတုံးလို့ ထည့်လိုက်မယ်… ဆိတ်ချ….
နောက်ဆုံးသတင်းကို အရင်ဆုံးရေးထားလို့ ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့။
သဂျီးမင်းရဲ့ မြန်မာ့ဂဇက် သတင်းစာထဲမလဲ. . .